Koeman oo ammaanay labo xiddig ka tirsan Barcelona kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Gimnàstic – Gool FM
(Barcelona) 13 Sebt 2020. Tababaraha kooxda Barcelona ee Ronald Koeman ayaa ammaanay labada xiddig ka tirsan Blaugrana ee Pedro González iyo Francisco Trincão, kaddib markii ay si cajiib ah kaga soo muuqdeen kulankii xalay ay la ciyaareen naadiga Gimnàstic de Tarragona.
Kooxda Barcelona ayaa xalay ku wajahday dhigeeda Gimnàstic de Tarragona kulan saaxiibtinimo, wuxuuna kulanka ku dhamaaday 3-1 ay ku adkaatay Blaugrana, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann iyo Philippe Coutinho ayaa goolasha u kala dhaliyay Barca.
“Pedro, wuxuu leeyahay hibo weyn, waa ciyaaryahan 17 jir ah, oo aan u arko heshiis aad muhiim ugu ah mustaqbalka kooxda Barcelona”.
“Pedro wuxuu nala qaatay tababarka, wuxuuna leeyahay awood uu kaga qayb galo kulamada, waana arki doonaa inta kulan uu la ciyaari karo kooxda”.
Intaas kaddib tababare Ronald Koeman ayaa ka hadlay xiddiga reer Portugal ee Francisco Trincão, wuxuuna yiri:
“Waan ka helay booskiisa garoonka, mararka qaar gudaha ayuu ka ciyaarayey mararka qaarna wuxuu ka ciyaarayey dibada”.
“Wuxuu leeyahay karti wanaagsan waana inuu la qabsadaa xawaaraha iyo laxanka ciyaarta, waxaana u arkaa inuu heshiis weyn kooxda u yahay mudada soo socota”.